Ethiopia/ Oromia: Haalli jiru hammaataa dhufee jira. – Kichuu
HomeNewsWorldEthiopia/ Oromia: Haalli jiru hammaataa dhufee jira.
#Free Michael Boran
My colleague Tim Uppal and I were proud to stand with the Oromo Community in a peaceful rally at the Alberta Legislature.
Akkan dhaga’etti biyya keessa haalli jiru hammaataa dhufee jira. Mootummaan magaalota Godinaa fi Aanaa to’achuu dadhabaa jira. Kun oduu gaarii dha yoo dhugaa ta’eef. Inni biroon Sheekotaa fi Qeesotni akka uummata tasgabbeessan dirqamni itti kennamee jira. Kana uummatni diduu qaba. Qeesii fi Sheekii akkanaa ofirraa dhiibuu dha.
Akkuma jedhame, Oromiyaatti lolli keenya sirna Neonafxanyaa amma diriiraa jiru fi Nafxanyaa duri amma ka’e waliini. Kanaaf ammo haala afuriin sochoona. 1) WBO jajjabeesina 2) hiriira nagaa yoo barbaachisaa ta’e qofa geggeesina 3) Shiftummaa Oromummaa ni jajjabeesina 4) Finfinnee ni ukkaamsina. Kuni ammarraa jalqabu qaba, yoo baatii lamaaf itti fufinsaan Finfinnee ukkaamsine namtichi seexana Abiy jedhamu Jawar fi Bekele ofiif kadhate gadi-lakkiisa. Kana sirriitti hubachu qabdu.
Straatejiin tokkon tokkoon isaa asitti kan maxxamfamu miti garuu humna sirritti hidhate qindaa’ee garee 15 daandii guddiicha Finfinnee gara Jibutii geessu giddu yoo jiraate dubbiin dhumate. Akka Oromiyaatti garuu daandiin banaa ta’u qaba, fakkeenyaaf namni yoo Naqamtee ka’e Mandii deemu barbaade, rakkoon jiraachu hin qabu. Akkuma bara 2016 Londonitti jedhame, Oromiyaa kan ijaaru dandeenyu yoo Xoophiyaan badde qofa. Amma kuni ifa ta’e jira.